Inowanzo Bvunzwa Mibvunzo nezve Spellcasting uye mashiripiti tsika - Nyika yeAmulets
Nharaunda nyowani yerutsigiro paWorld of Amulets
Mashandisiro aungaita Ingirozi / Olimpiki Midzimu / Reiki Kuchenesa uye Kubhadharisa Pad
Mashandisiro aungaitwa Demoni Kuchenesa uye Kubhadharisa Pad
How kushandisa sedumwa yako kana mhete?
World of Amulets nzira itsva dzekubhadhara
musha / nhau / Inowanzo Bvunzwa Mibvunzo nezve Spellcasting uye mashiripiti tsika
Inowanzobvunzwa Mibvunzo nezve Spellcasting uye tsika dzemashiripiti
Vanhu vanowanzoshamisika pamusoro pemabatiro atinoita kwedu kuperetera uye tsika dzemashiripiti uye vanotitumira maemail nezveizvi. Saka isu tichaenda kunotora mibvunzo inowanzo uye kupindura apa. Tarisa izvi nguva nenguva kuti uone mhinduro dzichangoburwa kana kutumira neyako muchikamu cheemaonero.
Chii chaunoshandisa amuleti?
Amulets edu ese akagadzirwa muUsina Simbi kana Sterling Sirivheri. Iyi simbi ndiyo yakanakisa yekusunga simba kwariri. Mamwe amulets anongopihwa mu sterling silver nekuti ndiyo yakanakira simba rakadzamirwa. Zvese mhete semuenzaniso dzinongowanikwa chete mune sirivheri.
Uine simbi nesirivha vhezheni yakafanana simba uye nekuita?
Hongu, ivo vaviri zvakafanana. Icho chikonzero cheiyo 2 vhezheni ndechekuti vamwe vanhu vane allergy yezvinhu zvesimbi kuti vagone kusarudza iyo yesirivheri. Iwo amulets esirivheri ane hupamhi hwakaenzana (35mm) asi akatetepa uye nekudaro akareruka.
Ini ndinofanira kupfeka amulet mukati kana kunze kwehembe dzangu?
Nzira yakanakisa ndeyekupfeka amulet inobata ganda rako. Nenzira iyoyo inozowirirana nesimba rako nenzira inoshanda.
Mhuka (dzinovaraidza) dzinogona kubata mazango here?
Ehe, izvo hazvingavhiringidzi masimba ayo
Ini ndinofanira kubhadharisa amulet?
Amulets ese anobhadhariswa kana atumirwa. Mushure mechinguva, zvinoenderana nesimba rekushandisa kwayo, ungangoda kuibhadharisa zvakare (kuchaja hakuna kufanana nekumisikidza, kumisikidza uye kutanga kuchaja kunoitwa nesu) Kubhadharisa amulet iwe unogona kuiisa kunze panguva izere mwedzi kwenguva yakareba sezvazvinogona (kanokwana maawa mana) kana iwe unogona kushandisa yekuchaja padhi senge iyo ngirozi huru pad or dhimoni padhi
Ini ndinogona kushandisa amulets ako kana mhete pamwechete nezvimwe zvakafanana zvinhu kubva kune vamwe vatengesi?
Isu hatikurudzire iyi kubvuma mune iyo kesi iwe paunoziva zvechokwadi kuti iyo imwe mazango kana zvindori hazvina kuvhurwa. Panguva iyoyo unogona kuzvipfekedza pamwechete pasina dambudziko. Iwe unogona kunge uine rombo rakanaka uye yedu amulet inomutsa imwe yacho. Izvi zvinogoneka kana zvese zviri zvemweya mumwe chete, semuenzaniso lucifer rwedu uye sigil amulet yelucifer kubva kune mumwe mutengesi. Izvi zvinoitika dzimwe nguva asi isu hatigone kuvimbisa izvi.
uri dhimoni mazango anokuvadza?
Kwete, nekuti isu tinoshandisa chaiyo yekudzivirira dhizaini iyo isingaregi simba riite kunze kwekutonga. Ese madhimoni edu nemamwe maamulets akachengeteka zvakakwana kupfeka.
Ndinogona here kugeza kana kushambira neiyo amulet
Hongu unokwanisa, hazvipindire musimba rayo
Zvinotora nguva yakareba sei kugadzira amulet?
Kugadzira amulet nyowani kunogona kutora makore asi kana tangove tine amulet iyo yave ichiedzwa uye yakawanikwa ichishanda isu tichiri kuda nezve mazuva e10 kuti igadzirire mutengi. Nhanho yekutanga ndeyokuzvigadzira nemuviri, mushure meizvozvo tinofanirwa kuichenesa kubva kuneese simba uye mushure maizvozvo amulet inofanirwa kuiswa kumuridzi. Tsika yekuzvitsaurira inoenderana nerudzi rwemasimba, varidzi kukumbira uye zuva rakakwana uye nguva yekuti masimba ari kuzere kugona saka anogona kusungirwa kune amulet uye muridzi.
Zvinotora nguva yakareba sei kuti amulet iite basa rayo?
Paunongogamuchira amulet, ipe iyo imwe nguva, kusvika kumavhiki mashoma kuti ugadzirise uye ugadzire symbiosis nesimba rako, kazhinji zvinotora mazuva makumi maviri nemasere.
Chii chekuita kana ndikaona pasina shanduko mushure memazuva makumi maviri nemasere?
Midzimu ine nzira yayo yekuita zvinhu. Ivo vafambira mberi zvakanyanya kupfuura isu asi pane zvinhu zvishoma zvinogona kunonotsa maitiro.
1) Unoedza kuvasundidzira kuti vashande nekukurumidza. Ndiyo hombe Aiwa. Iyo mweya haigone kusundirwa, kuarairwa kutenderedza kana kuitirwa nhema. Varegei vaite zvinhu zvavo uye ivo vanozochengeta.
2) Iwe hauna kuita chiito. Iyo mweya inogadzirira mamiriro asi iwe unofanirwa kutora chiito. Sezvo vasina chimiro chemuviri, havagone kudyidzana muzvinhu zvepanyama. Rega ndikupe muenzaniso: Midzimu yakafanana nemurimi anorima ivhu rekudyara muriwo, uye anotoisa mbeu nekuita kuti ikure. Asi iwe uchafanirwa kutarisira zvirimwa. Ukasazviunganidza nenguva, zvinoenda kunoparara.
3) Iwe hauna ruremekedzo kana iwe unoratidza kwete kuonga kune mweya. Vacharega kukushandira uye hapana nzira yekuvaita kuti vachinje mafungiro avo mumashure.
4) Hausi wechokwadi mukukumbira kwako kumidzimu.
Midzimu inogona kuita zvakawanda asi haigone kukuita kuti ubhururuke, uone kuburikidza nezvinhu, uve nesimba remunhu makumi maviri, nezvimwe ... Ndine chokwadi kuti urikutora pfungwa yangu pano.
Midzimu ingandiita mupfumi uye mukurumbira?
Hongu vanogona, kana iwe ukatora mweya chaiyo uye woita zvikumbiro zvakanaka. Dambudziko ne mari ndiyo mweya iyoyo usingazive kuti mari chii nekuti zvinoreva zvinhu zvakawanda zvakasiyana kune vanhu vazhinji. Hechino chinyorwa chakazara nezve sei mari mazango achingoshanda kune vakangwara
Ndingaite kuti vamwe vanhu vabate amulet yangu?
Hapana munhu anogona kuibata nemaoko avo, izvi zvakakosha nekuti vamwe vanhu simba rinogona kuendeswa kune amulet yako. Kana izvi zvikaitika zvinogona kuve huchenjeri kuve nepombi yekuchenesa / yekuchaja padyo. Kana iwe usina, tizivise uye isu tichaita yekuchenesa uri kure.
Kana iri mhete, zvese zviri pamusoro zvinoshanda kunze kweku kune vamwe vanhu kubata rin'i. Iri harisi dambudziko uye harizokanganisa masimba akasimbiswa mazviri.
Kana mumwe munhu akabata tsvimbo yako nemaoko, ndapota taura nesu kuti tibatanidzwazve.
Ini ndinoshanda sei uye nekutarisira amulet yangu?
Hechino chinyorwa chakazara nezvenyaya iyi:
Mashandisiro Aungaita Yako Amulet Kana Ring?
Ini ndinofanira kupa zvibayiro kumidzimu?
Kwete, izvo zvibayiro zvekushandisa zvinoitwa nesu. Uye ndapota usambopa ropa kumweya. Ivo havazvide uye vanomira kukushandira. Kana iwe uchida kupa chimwe chinhu sechiratidzo chekutenda kune chikumbiro chavakaona kwauri, shandisa manzwiro akaita serudo kana kuonga. Mvura nyowani, waini, zvihwitsi, zvirimwa, zvinonhuwira, nezvimwe ... zvinogona zvakare kushandiswa.
Aya mazango anovhiringidza chitendero changu here?
Kwete, ivo havaigona hanya zvishoma kana iwe uri muKristu, Buddhist, Pagan, Muslim, nezvimwe ...
Pane chero backlashes kubva pakushandisa amulet?
Kwete, edu ese amulets akachengeteka zvakakwana kushandisa. Mune zvimwe zviitiko zvisinei vanogona kukwezva imwe mweya nekuda kwesimba ravanobata. Izvi hazviwanzoitika asi zvinogona kuitika. Iyi mweya inokwezva nesimba rechitumwa haigone kukuvadza asi inogona kukuita kuti unzwe kusagadzikana
Zvinotora nguva yakareba sei kuita kuperetera?
Izvi zvinoenderana zvakanyanya nerudzi rwesimba rinofanira kushandiswa. Mamwe mapereji anongoda 30 maminetsi asi mamwe madonhwe anogona kutora maawa e2 kana anopfuura.
Zvinotora nguva yakareba sei kuti ive chiperengo kuti uwane simba rakazara?
Zviperengo zvinoda nguva yavo yekugadzirisa masimba, mamiriro uye chinangwa. Chiperengo chenguva dzose chinoda mazuva e28, kutenderera kwemwedzi kuzere kuzere pasimba. Mamwe akasarudzika, zviperengo zvakaoma zvinogona kutora kusvika ku3 mwedzi.
Ini ndingaite rimwe basa re simba ini ndakamirira kuti spell yako iuye kuzere simba?
HERE, kana iwe ukaita basa remagetsi panguva yekutenderera kwemwedzi iwe unozoshandura mamiriro acho uye huroyi hauchazoshanda. Isu chete tinogona kuita basa rekuwedzera simba kana iwe watove nechitsinga kubva kwatiri. Isu tinoziva maitirwo azvo uye tinokwanisa kugadzirisa iro rekuwedzera simba simba kune chipere kuti rirege kupindira.
Ini handisi kuona shanduko, nei izvi?
Izvo zvipenga zvinoshandura mamiriro asi iwe unofanirwa kutora matanho. Mhedzisiro yemupere zvinoenderana nezvaunoita nayo. Rega ndikupe muenzaniso: Iyo tsinga yakaita semurimi anogadzira munda wemutengi munzvimbo dzakaringana kuitira kuti mutengi agodyara zvaanoda. Kana mutengi akasadyara chero chinhu, hazvigoneke kukohwa panguva yakatarwa. Zvimwe zvitsinga zvinogona kukonzeresa shanduko musimba uye uchaona aya mashifts. Iyi ndiyo kesi kune kesi saka hazvigoneke kuverengera vese pano. Rega ndikupe muenzaniso: Unoda kuti rudo rwekupinga rukandwe kuti uwane rudo rwehupenyu hwako. Kubva zuva 3 unotanga kuona munhu mumwe chete nguva dzose zuva. Ichi ndicho chiratidzo chekuti munda wenyika wagadzirira. Zvino iwe unoda kudyara. Saka taura nemunhu iyeye uye uchaona kuti huroyi hwashanda. Asi kana ukasaita chiito, ucharasikirwa nemukana.
Unoshandisa mhando ipi yemashiripiti?
Kwatiri hakuna mutema mashiripiti, mashiripiti, matenga mashiripiti kana dhimoni mashiripiti. Tinosarudza kuvadaidza vese kungoti mashiripiti kana simba rekushandisa kana kuraira. Zvese isimba, kuisa zvinyorwa pairi zvinongogadzira husingadiwe huviri izvo zvinozotungamira kuvaisa seakanaka kana akaipa. Hakuna zvakadaro chinhu chakanaka kana chakaipa mashiripiti. Simba harina huviri. Isu tinoshandisa simba rinoshanda kwazvo pane imwe neimwe nyaya. Kana zvisina basa kuti simba ripi rekushandisa, tinopa zvinotevera: Ngirozi / Ngirozi huru simba, daemon simba, Midzimu yeOlimpiki simba kana Reiki. Aya ndiwo masimba makuru atinoshandisa, asi isu tinoshandisawo zvisikwa mweya simba, simba rekudenga uye eon simba. Mhando yatinozoshandisa inoenderana nenyaya iripano.
Kune backlashes kana iwe uchindikandira chiperengo here?
Kwete, tinotora zvese zvekuchenjerera uye tinoita zvinyoronyoro munzvimbo yakachengetedzeka zvakakwana.
Ndeipi tsvimbo ine simba kwazvo yatinayo?
Matumwa edu ese simba, zvese zvinoenderana nezvaunoda iwe. Kana iwe uine nzvimbo zhinji muhupenyu hwako kwaunoda kuvandudzwa, ini ndingakurudzira iyo abraxas mazango or mhete. Aya ane simba rakanyanya uye anoshanda nzvimbo dzese.
Unoita tsika magadzirirwo?
Dzimwe nguva tinoita asi panguva yecovid-19 denda hatizokwanisi kugamuchira tsika tsika.
Ndinogona kutengesa zvigadzirwa zvangu pane yako saiti?
Hongu unokwanisa. Chero bedzi zvigadzirwa zvako kana masevhisi ari emweya / esoteric mune zvakasikwa. Kunyora zvigadzirwa zvako mahara zvachose uye isu tinongobhadharisa 4.5% yekutengesa kwako. Iwe unogona kuwana rumwe ruzivo nezvekuva mutengesi pano: Iva mutengesi paWOA
Nezve kutumira uye kuteedzera
Nyika yeAmulet inoshandisa nzira mbiri dzekutakura:
1) Yepasi Pose Certified Tsamba
2) DHL Express kutumira
Yepasi rose Certified tsamba ine yekuteedzera pakutanga kwekutakura, kusvikira pasuru yacho yasiya nyika uye pakupedzisira, kana pasuru yacho yasiya nzvimbo yako yepasi rose yekuparadzira nzvimbo yekuendesa. Munguva yecovid-19 denda, nguva yekuendesa inogona kuve chero pakati pe1 ne6 mavhiki nekuda kwevakawanda vanorwara nevakavharirwa vanhu, zvichikanganisawo yako yepositi sevhisi.
DHL kuratidza kutumira kunotora pakati pe3 ne6 mazuva (dzimwe nzvimbo dziri kure dzinogona kutora mazuva masere) Kutumira kuri munguva chaiyo. Kana iyo package ikachinja nzira, iwe uchagamuchira ziviso yakananga kubva kuDHL. Kuti izvi zviitike tinoda email yako uye nhamba yefoni. Pasina ivo haugone kushandisa DHL.
Ndeipi nzira dzokubhadhara dzaunogamuchira?
Isu tinobvuma: paypal, ese makuru makadhi echikwereti, crypto mari, bhangi kuenda kubhangi kuchinjisa uye muSpain: bizum. Isu hatigamuchire Western Union kana Kubhadhara pane Dhirivhari
Kana usati wagamuchira pasuru yako mushure memasvondo matanhatu, taura nesu ipapo ipapo kuti tikwanise kufaira chikumbiro uye titumire chinhu icho zvakare.
Nezve Guarantee Yedu
Isu tinomira kuseri kwezvigadzirwa zvedu zvese. Vanoshanda. Neruzivo rwakasanganiswa rweanopfuura makore makumi manomwe neshanu echikwata chedu tinogona kumira kuseri kweshoko iri. Kana iwe usina kugutsikana, une mavhiki maviri ekudzosa chinhu uye unozodzoserwa zvizere.
Kana pasuru yako ikarasika, isu tinokutumira iwe nyowani.
Isu tiri timu yevashandi vashanu vemashiripiti vane chiitiko chakasanganiswa chemakore anopfuura makumi manomwe nemashanu mumhando dzose nemhando dzemashiripiti netsika. Isu tinogadzira aya amulets zvinoenderana neruzivo rwedu kubatsira vanhu pasi rese kuvandudza hupenyu hwavo. Chikamu chemabhenefiti edu chinopihwa kune rudo kuti chengetedza muyero pakati pesimba. Iye ega munhu anoonekwa wechikwata chedu che5 ndiPeter, Ndiye anotarisira webhusaiti uye basa revatengi. Nguva pfupi yadarika takatora vamwe vanhu vaviri kuti vamubatsire pabasa iri. Peter ndiye Master Sortiarius iye saka anogona kukubatsira iwe nemibvunzo yako yese.
Sei kubatana nesu?
Parizvino tanga tave newhatsapp chat yekutaurirana asi nekuti iyo hombe vhoriyamu yezvikumbiro uye meseji isu tinofanirwa kuzvidzorera kune akasiyana madhipatimendi atinawo kune izvi zvikumbiro nemibvunzo:
Kuchengeta & Orders: orders@worldofamulets.com
Yekutanga-kutengesa mibvunzo: vatengi@worldofamulet.com
Wona chizere chinyorwa →